Ungayihlanza kanjani i-WhatsApp yethu ku-iPhone naku-Android | Izindaba zamagajethi
I-WhatsApp ngokungangabazeki uhlelo lokusebenza lokuthi wonke umsebenzisi we-smartphone alande ngokushesha nje lapho eqala ukumiswa, isibe ukuphela kwesizathu sokuba abantu abaningi basebenzise i-terminal ehlakaniphile, ngoba isivumela ukuthumela imiyalezo nganoma yimuphi umsebenzisi emhlabeni. Kungenzeka kungabi okungcono kakhulu, ngoba izinhlelo zokusebenza ezinjengeTelegram zinikela ngezici eziningi ezenza ukuthi isebenzelane kalula futhi isebenziseke. Noma iMessage yakwa-Apple, enikezela nangesevisi ehlukile, kepha kunzima kakhulu ukushintsha umkhuba yingakho ungeke wenze wonke umuntu aguqule uhlelo lokusebenza lwemiyalezo.
Ngakho-ke futhi inzuzo engcono kakhulu ye-WhatsApp, inani labasebenzisi bayo likhulu kakhulu kangangokuba akekho ongakwenza ngaphandle kwalo. Ngokuhamba kwesikhathi lolu hlelo belulokhu luthuthukisa imisebenzi, ikakhulukazi kusukela i-Facebook yathatha ubunikazi bayo. Uhlelo lokusebenza lunezinto eziningi ezinhle, phakathi kwazo kungenzeka ukushintshanisa zonke izinhlobo zamafayela noxhumana nabo, yingakho isitoreji sethu sigcina sigcwele izinto esingazidingi futhi kusikhawulela uma kukhulunywa ngokukwazi ukugcina izinto ezibalulekile. Lapha sizoba nemininingwane yokuthi singaxazulula kanjani lokhu namanye amaqhinga amaningi.
1 Amasu okugcina i-WhatsApp ihlanzekile
2 Khubaza ukulanda okuzenzakalelayo ku-iPhone naku-Android
2.1 Ungakwenza kanjani ku-iPhone
2.2 Vimbela izithombe ekugcineni ku-iPhone Camera Roll yethu
2.3 Khubaza ukulanda okuzenzakalelayo ku-Android
3 Ungayihlanza kanjani i-WhatsApp ku-iPhone noma ku-Android yethu
3.1 Ukususwa kokuqukethwe kwe-IPhone
3.2 Isusa okuqukethwe ku-Android
3.3 Khetha lokho esifuna ukususa noma ukukugcina
Amasu okugcina i-WhatsApp ihlanzekile
Sizoqala ngokuyisisekelo kakhulu futhi akuyona enye into ngaphandle kokugwema ukuthi udoti uyaqhubeka nokuqongelela ohlelweni lwethu lwemiyalezo esiyithandayo, kuyingxenye yosuku lwethu lwanamuhla noma cishe wonke umuntu, uthola njalo ama-audios angahleliwe, ama-gif noma ama-meme, yebo Bangase basihlekise, bayasihlupha lapho bebuka isithombe sethu sezithombe. Akumnandi ukufuna ukukhombisa izithombe zezinkumbulo zethu bese ngephutha sizithole sinenye yezinkunzi esizithola kwelinye lamaqembu amaningi. Ngaphezu kokuthatha isikhala esibalulekile.
Khubaza ukulanda okuzenzakalelayo ku-iPhone naku-Android
Lokhu kufanele kube yisinyathelo sethu sokuqala masisebenzise i-iPhone noma iyiphi i-Android. Kungumsebenzi owenziwe ngokuzenzakalela, obangela iningi labantu ukuthi lizithole linenkinga yememori ephelele futhi kufanele lisuse njalo noma liye ngokweqile lapho kufanele likhiphe uhlelo lokusebenza.
Ungakwenza kanjani ku-iPhone
Sizocofa ku "Ukusetha"
Sizokhetha inketho "Idatha nokugcina"
Esigabeni "Ukulanda ifayela okuzenzakalelayo" khetha "Cha" kufayela ngalinye esingafuni ukuqhubeka nokulanda nge-othomathikhi esigungwini sethu, lapho sitholakale khona izithombe, amavidiyo, imisindo kanye nemibhalo. Ngokwami ​​ngincoma ukuthi kungasebenzi konke futhi kube yibo abanqume ukuthi ngabe sifuna ukuzilanda ngokwenza.
Vimbela izithombe ekugcineni ku-iPhone Camera Roll yethu
Enye inkinga esinayo ku-iPhone ukuthi izithombe ziya ngqo esigabeni sezithombe se-terminal yethu, ngakho-ke ahlanganiswe nezithombe esizithatha ngekhamera. Yilokhu okwenza ukuthi uma sibheka isithombe samaholide ethu noma usuku lokuzalwa lokugcina, kufanele sihambe phakathi kwama-memes amaningi angenangqondo noma izithombe esingafuni ukuzibona. Ukukugwema, kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilula:
Chofoza ku- "Ukusetha"
Sakhetha ukhetho "Izingxoxo"
Sizokwenza kungasebenzi inketho «Gcina ezithombeni»
Kungenye inketho eyenziwe yasebenza ngokuzenzakalela kuwo wonke ama-iPhones ethu futhi ingenye yalezo ezidala izinkinga eziningi ekusebenziseni kwayo lokhu kuyinto engenzeki ku-Android, lapho i-WhatsApp inefolda yayo yezithombe. Kusukela kulo mzuzu ngeke uphinde ukhathazeke ngalolu daba, kusukela manje uma ufuna ukuba nesithombe se-WhatsApp esondweni sakho, kuzofanela usilande ngesandla bese ukhetha inketho.
Khubaza ukulanda okuzenzakalelayo ku-Android
Into yokuqala okufanele siyenze chofoza amaphuzu ayi-3 esinayo ngaphezulu kwesokudla nokufinyelela «Izilungiselelo»
Sangena "Idatha nokugcina"
Ezigabeni «Landa ngedatha yeselula» Singawavala wonke lawo mafayela esingafuni ukuwalanda ngokuzenzakalela lapho sisebenzisa idatha yethu yeselula, esigabeni «Landa nge-WiFi» Singakhubaza yonke into esingafuni ukuyilanda ngokuzenzakalela lapho sisebenzisa i-WiFi.
Ungayihlanza kanjani i-WhatsApp ku-iPhone noma ku-Android yethu
Manje njengoba sesinakho konke okulungiselelwe ukugwema ukungena ku-loop engenamkhawulo yokuhlanza, singaqhubeka nokuhlanza ngokuphelele wonke udoti wedijithali esiwugcine kuhlelo lwethu lwe-WhatsApp. Uma kade usebenzisa okulandwayo okuzenzakalelayo futhi ugcina i-WhatsApp esondweni, uzoba nomsebenzi okufanele uwenze.
Ukususwa kokuqukethwe kwe-IPhone
Ukuhlanza ngaphandle kokulandela, I-WhatsApp isishiyele inketho eyenzelwe yona. Ngalokhu kufanele ulandele izinyathelo ezilandelayo:
Manje sizocindezela "Idatha nokugcina"
Sakhetha ukhetho "Ukusetshenziswa kwesitoreji"
Ngemva kwalokho sizothola uhlu oluhambisana nazo zonke izingxoxo namaqembu esiwavulile noma esiwagcinile kuWhatsApp futhi uzosazisa ngesikhala esithathwe yilowo nalowo kubo. Ngaphakathi kwalezi zingxoxo noma amaqembu sizoba nohla lwamafayela, phakathi kwawo kukhona:
Uma sichofoza ezansi lapho kuthi "Phatha" sizokwazi ukukhipha okuqukethwe esikukhetha ngqo engxoxweni ngayinye. Kumele sikhumbule ukuthi uma sisusa okuqukethwe, kuzosusa yonke into ngaphandle kokushiya umkhondo. Ngakho-ke sincoma kuphela ukwenza lokhu, ngezingxoxo noma ngamaqembu lapho kucaca khona ukuthi akukho lutho esifuna ukulugcina.
Isusa okuqukethwe ku-Android
Into yokuqala okufanele uyenze chofoza ku- 3 amaphuzu esinayo phezulu ngakwesokudla kanye nokufinyelela «Izilungiselelo»
Manje sizongena "Ukusetshenziswa kwesitoreji" lapho sizothola khona zonke izingxoxo noma amaqembu esiwagcinile kuhlelo lwethu lokusebenza lweWhatsApp, ngaphakathi kwalowo nalowo wabo sizoba nesikhala esihlala ngamunye wabo ohlukaniswe uhlobo lwefayela. Uma sifuna ukuhlanza ngokujulile futhi sicacile ukuthi sesivele sinakho esikuthandayo okulondoloziwe noma siyazi ngempela ukuthi ngeke siphuthelwe yilutho, sizocofa ezansi ngakwesokudla lapho kusho khona "Khulula isikhala."
Ngale ndlela, izicelo zethu ze-WhatsApp zizohlanzeka ngokuphelele kudoti, ngaphandle kokwenza ukufakwa kabusha noma ukusula amafayela esingafuni wona ngamunye ngamunye.
Khetha lokho esifuna ukususa noma ukukugcina
Uma, ngokuphambene nalokho, asifuni ukususa ngokungakhethi okuqukethwe futhi sifuna ukwenza ukukhetha okuphelele. Kuzo zombili izinhlelo izinyathelo ziyafana:
Singene kufayela le- ingxoxo noma iqembu embuzweni
Chofoza phezulu, lapho ikhona igama loxhumana naye.
Sikhetha lapho inketho ye- "amarekhodi"
Kuzovela iwindi lapho sizobona khona konke esikutholile kulowo oxhumana naye noma iqembu, yingakho singenza ukukhetha kwalokho esifuna ukukusindisa noma ukukususa.
Siyethemba ukuthi kusukela manje lokhu inkinga eyodwa encane osukwini lwakho nosuku nge-smartphone yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » WhatsApp » Ungayihlanza kanjani i-WhatsApp yethu ku-iPhone naku-Android
I-SPC Jasper, ucingo lwabantu asebekhulile abane-WhatsApp [UKUHLAZIYWA]